China Stainless Steel Otomatiki Sensor Wall Yakaiswa Bathroom Sipo Dispenser FG2020 fekitori nevagadziri | Feegoo
Stainless Steel Automatic Sensor Wall Yakaiswa Bathroom Sipo Dispenser FG2020
Main Material: simbi isina tsvina #304 Kukura Kwechigadzirwa: 101*91*264mm
Tank Volume: 1000 ml liquid supply: 0.5-2.5ml (inochinjika)
Induction Distance: 50-150mm Low Battery Hint: LED inopenya
Sensing Type: Touchless Infrared Voltage: DC 6V/AA bhatiri (4pcs)
1. Hutsanana—Wall Mounted Bathroom sipo dispenser Automatic touchless infrared, Yakanyanya hutsanana pane manual sipo dispenser.
2. Waterproof-stainless steel soap dispenser mukati Zvese zvinhu zvemagetsi zvakavharwa kuti zvisaende kumvura. Bhodhi redunhu rinobatwa nependi yakakosha isingapindi mvura uye yekupfapfaidza, iyo inogona kunyatso dzivirira zvakakosha zvikamu zvemagetsi mukati me sipo.
3. Kuvaka Kwakasimba-Kushandisa Stainless simbi #304 shell cover, yakatsiga uye yakasimba. Sipo dispenser goko 304 zvinhu simbi isina tsvina, haingaite ngura, rega chigadzirwa chirambe chakanakisa kwenguva yakareba, uye simba regoko rakakura kupfuura zvakajairika simbi isina tsvina.
4. 5 yakasiyana-siyana inogadziriswa mazinga emvura-Kunzwa kureba kunogadziriswa uye kugadzirisa zvakare kunowanikwa, chiratidzo che LED. Vashandisi vanogona kusarudza yavo yemvura inobuda zvinoenderana nezvavanoda, izvo zvine vanhu zvakanyanya. Sangana nezvinodiwa zvakasiyana zvevatengi vakasiyana.
5. Chiratidzo che LED-Mutsvuku webasa uye kupenya kwebhatiri yakaderera. Chiedza chechiratidzo chinogona kuyeuchidza vashandi vekuchengetedza kuti vatsive mvura kana bhatiri munguva, iyo inonyanya kungwara.
6. Huru hukuru-1000ml liquid dispenser, nyore kuwedzera. Yakakura sapo yekuburitsa sipo inogona kuderedza nguva yekuchengetedza yevashandi vekugadzirisa.
Inocherechedzwa Transparent Window Dhizaini
Kuburikidza nehwindo rakajeka, Inogona kuona huwandu hwemvura mubhodhoro rekudhiraivha sipo kuitira kuti vashandi vekugadzirisa vawedzere mvura nenguva.
1mm ukobvu 304 simbi isina tsvina shell inogona kubhuroshwa kana kukwenenzverwa.
Iyo goko yakasimba haisi nyore kukuvadza uye haina ngura.
Muchina wepamusoro kurapwa: anti-fingerprint pendi
Masvingo Akaiswa Bathroom Sipo Dispenser
Kaviri anti-kuba kudzivirira, chivharo chepamusoro anti-kuba chikiyi, inoda kiyi chaiyo yekuvhura, inogona kudzivirira zvinobudirira sipo mukati memuchina wakabiwa.
Chivharo chekudzivirira kuba chiri pazasi chinogona kudzivirira sipo yekugezesa kufamba uye kudzivirira sipo yekubira kuti isabiwa.
Nyore Kuwedzera Liquid
Vhura chivharo chekuisa sipo uye Bvisa sipo yegel cap. inogona kuwedzera mvura yacho zvakananga.
Hapana chikonzero chekuvhura sipo dispenser panel, kuwedzera mvura iri nyore.
Zvakapfuura: Stainless Steel otomatiki Sensor Sipo Dispense Yepamba FG2018
Zvinotevera: ABS Automatic Hand Sterilizers FG6000
Yakanaka Liquid Sipo Dispenser
Maoko ekugezesa Sipo
Zvigadzirwa zveSipo zvemvura
Maresitorendi Vacheche Kuchinja Tafura FG1689
Stainless Simbi Inodziya Air Hand Dryer FG2800
Stainless Steel Automatic Sensor Sipo Dispense ...
Stainless Simbi Magetsi Hand Dryer FG8086